विश्व Archives - फ्रन्टलाईन नेपाल
कोभिड–१९ विश्वव्यापी रुपमा फैलिएपछि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सबै आगन्तुकहरूका लागि देशको सिमाना बन्दको घोषणा गरेका छन् । अस्ट्रेलियाका आप्रवासी बासिन्दा तथा अन्य नागरिकलाई स्थानीय समयाअनुसार शुक्रबार राति ९ बजेदेखि देशमा प्रवेश गर्न निषेध गरिने बिहीबार भएको एक प्रेस सम्मेलनमा बताएका हुन् । गैर अष्ट्रेलियाली नागरिक र देशमा प्रवेश गर्न चाहने अन्य देशका नागरिकलाई यस्तो […]
६ चैत्र २०७६, बिहीबार १६:४६ March 19, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
Featured 03 विश्व विश्व समाचार
सिरियाको इदबिल शहरमा रुसस् युद्व विमानले बमबारी गरेको छ । रुसी समाचार संस्था तासका अनुसार आतंकारीहरुलाई लक्षित गरी एरोस्पेस फोर्सको एसयू बम्बरले बमबारी गरेको हो । उक्त क्षेत्रमा आतकंकारीको अड्डा रहेको दाबी गरिएको छ । इदबिल क्षेत्रमा रुसी एरो स्पेसले आक्रमण गरेको हो ।आतंककारी गतिविधीलाई न्यूनीकरण गर्न सिरियन सरकारको आग्रहमा रुसी एसयू २४ एयरक्रफ्टले आक्रमण […]
९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १७:२० February 21, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १४:१४ February 18, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
Featured 03 विश्व समाचार सूचना तथा प्रविधि
इन्टरनेटमा हरेक दिन १३ हजार पटक खोजिन्छ समोसा
काठमाडौं– विश्वमा समोसा, चाट, बटर, चिकनजस्ता खानेकुराहरुको माग बढ्दो छ । यसलाई नै प्रमाणित गर्छ, अमेरिकाको ग्लोबल मार्केट रिसर्च कम्पनीले गरेको एक अनुसन्धानले पनि । यो रिसर्च कम्पनीका अनुसार विश्वमा प्रत्येक दिन १३ हजार पटक समोसाबारे इन्टरनेटमा सर्च गरिन्छ । योसँगसँगै खानामा चिकन, पालक पनिर, नान, दाललगायतका खाद्यान्नहरु पनि अत्यन्त धेरै खोजिन्छन् । कम्पनीले गरेको […]
१९ माघ २०७६, आईतवार १४:२५ February 2, 2020 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
काठमाडौं। चीनमा फाइभजी सेवा शुरु भएको छ। चीनका प्रमुख तीन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले बिहीवारदेखि फाइभजी सेवा शुरू गरेका हुन्। अमेरिकासँगको प्रविधिको अन्तर घटाउन चीनले फाइभजी सेवाको शुरूआत गरेको हो। चीनका चाइना मोबाइल, चाइना टेलिकम र चाइना यूनिकमले आफ्नो फाइभजी सेवा शुरू गरेका हुन्। अमेरिका र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकमा शुरु भइसकेको यो प्रविधि चीनले पनि शुरु […]
१६ कार्तिक २०७६, शनिबार १४:१९ November 2, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
अमेरिकी दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई फाईभ जी उपकरण बेच्न प्रतिबन्ध लागेपछि चिनियाँ कम्पनी ह्वावेईले आक्रामक रूपमा भारतमा बजार खोज्न थालेको छ। अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनसँग आबद्ध प्रविधि विश्लेषक अरुण सुकुमार भन्छन्, “केही देशले उसलाई गलहत्याइदिइसकेका छन्। त्यसैले फाईभ जीका लागि भारतसँग सम्भावित सम्झौता विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।” उनका अनुसार तत्काल ह्वावेई सहज परिस्थितिमा भए पनि उसले संसारभरि […]
१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १३:४४ October 18, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
Featured 02 विश्व विश्व समाचार
सास फेर्ने ढुंगा
एजेन्सी । विश्वमा केही यस्ता आश्चर्य चकित पार्ने वस्तुहरु रहेका छन् जसबारे अझै अध्ययन र अनुसन्धान हुनै बाँकी रहेको छ । तपाईले ढुंगालाई त देख्नु भएको छ ? तर, ढुंगा फोर्दा कहिल्यै रगत वा चोक्टा जस्तो आएको देख्नु भएको छ । यसो भनिरहँदा यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने सोच तपाईमा आउन सक्छ ? चिली तथा […]
९ आश्विन २०७६, बिहीबार १५:२१ September 26, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
स्वास्थ्यका लागि किन जोखिमयुक्त हुन सक्छ फाइभ–जी ?
काठमाडौं । साउन १ । फाइभ–जी मोबाइल नेटवर्क विश्वमा उदाउँदो छ। यो प्रविधि बेलायतका केही सहरमा जडान भइसकेका पनि छन्। यसका फाइदाबारे सर्वत्र चर्चा भइरहँदा फाइभजी प्रविधिमाथि प्रश्न पनि खडा भएका छन्। मानिसहरु नयाँ प्रविधि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक या फाइदाजनक के कस्तो हुने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। फाइभ–जीमाथि मानिसको चिन्ता के हो, के त्यस्ता प्रमाण छन् जसले मानिसका […]
१ श्रावण २०७६, बुधबार १४:४९ July 17, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
Featured 03 विश्व विश्व समाचार सूचना तथा प्रविधि
काठमाडौं । असार २५ । तपाईले कसलाई सोध्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ हाज्मा बेन्डेलाज कि त नायक हुन वा साइबर युगका खतरनाक अपराधी । कम्प्युटर कोडिङमा विशेष दख्खल राख्ने र पाँचभाषा बोल्न जानेका यी चर्चित ह्याकरलाई ‘ह्याप्पी ह्याकर’ नामले पनि चिनिन्छ । यी २७ वर्षिय अल्जेरियन कम्प्युटर साइन्स ग्राजुयटले एक कम्प्युटर भाइरसको प्रयोगबाट २०० भन्दा धेरै अमेरिकी […]
२५ असार २०७६, बुधबार १६:५६ July 10, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)
Featured खेलकुद मनोरन्जन विश्व
रोहित शर्मा एकै विश्वकपमा पाँच शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी
काठमाडौं । असार २२ । इंग्ल्याण्ड र वेल्समा जारी १२ औँ आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा भारतका ब्याट्सम्यान रोहित शर्माले पाँचाैँ शतक प्रहार गरेका छन्। उनले शनिवार सम्पन्न भारतकाे लिग चरणकाे अन्तिम खेलमा श्रीलंका विरुद्ध किर्तिमानी शतक प्रहार गरेपछि एकै विश्वकपमा पाँच शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। उनले यसअघि दक्षिण अफ्रिका, पाकिस्तान, इंग्ल्याण्ड […]
२२ असार २०७६, आईतवार १३:२५ July 7, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल Comment(0)